क्वारेन्टाइनमा के खाने, के नखाने ? – Hamrosandesh.com
क्वारेन्टाइनमा के खाने, के नखाने ?
कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि हिजोआज संसारभरीका मानिसहरुले स्वयंलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंले आफ्नो पौष्टिक आहारमा परिर्वतन गर्नु भएन भने विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै मात्र नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जसका आधारमा घर भित्र रहेर पनि आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्न सकिनेछ ।
यसका साथै यी पौष्टिक आहार सम्बन्धि जानकारीले रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो हुन्छ । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा के–के खाने र कुन– कुन कुराबाट बच्ने भन्ने बारेमा केही जानकारी :
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जारी गरिएको खाना तथा पोषण निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कुराहरु यस प्रकार छन् :
आफ्नो पौष्टिक आहारमा धेरै भन्दा धेरै फाइबरयुक्त खानेकुराहरु जस्तै तरकारी, फलफुल, दाल, गेडागुडि, ओट्स, ब्राउन पास्ता, ब्राउन राइस आदि खानेकुरा समावेश गर्नु पर्छ । यसले पाचन क्रिया राम्रो हुन्छ भने एसिडिटी, कब्जियत र अन्य समस्याहरुको सामना गर्नु पर्दैन ।
क्वारेन्टाइनको क्रममा शरीरलाई हाइड्रेट राख्नका लागि दिनभरीमा कम्तिमा पनि ८–९ गिलास पानी पिउनु पर्छ । यसका साथै दिनमा दुई पटक ग्रीन टी, एक गिलास कागती पानी पिउनु पर्छ । एक गिलास जूस अथवा एक गिलास दुध सेवन गर्नु पर्छ ।
विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार क्वारेन्टाइनको क्रममा मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा कोरोनाको खतरा झन् बढ्छ ।
आफ्नो पौष्टिक आहारमा त्यस्ता खानाहरु अत्याधिक सेवन गर्नु पर्छ, जसमा भिटामिन सी र डी अत्यधिक मात्रामा हुन्छ । यसले तपाईंको रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो बनाउँछ । खानापछि सख्खर र सुप सेवन गर्नु पर्छ । यसले खाना पचाउन सजिलो हुन्छ ।